Al-Shabaab oo toogasho ku fuliyey Afar ruux - Radio Risaala: Somali News Online
Home Wararka Al-Shabaab oo toogasho ku fuliyey Afar ruux
Al-Shabaab oo toogasho ku fuliyey Afar ruux
Xubno ka tirsan Ururka Al-Shabaab ayaa fagaaro ku yaalla deegaanka Sablaale ee Gobolka Shabeellaha Hoose waxaa ay ku toogteen Afar ruux oo ay sheegeen inay ka tirsanaayeen dowladda Federaalka ah ee Soomaaliya.
Goobta toogashada ayaa waxaaa ku sugnaa qaar kamid ah Shacabka deegaanka Sablaale,waxaana dil toogasho ah lagu fuliyey Afarta Ruux oo Al-Shabaab ay sheegeen inay u Shaqeynayeen Dowladda Soomaaliya,waxaana Afarta Ruux ay kala ahaayeen.
1: Ayuub Xassan Buraale oo ay sheegeen in uu ka tirsanaa Maamulka degmada Kuntuwaareey uguna Magacaawnaa dhirta iyo daaqa.
2: Xassan Cusmaan Cali (Abayle) oo ay Shabaab sheegeen in uu ka tirsanaa Ciidamada dowladda ee degmada Baraawe ka howlgallaan aadna looga yaqaanay degmadaas.
3: Xassan Faarax Maxamad (Gambiye) ayay Shabaab sheegeen in uu ka tirsanaa Ciidamada dowladda,isla markaana ay qabteen,isaga oo ku wajahnaa degmada buulo Burde ee Gobolka Hiiraan.
4: Xuseen Xassan Geelle oo ah ninka Afaraad ayaa Al-Shabaab ay sheegeen in uu ka tirsanaa Ciidamada Dowladda Soomaaliya,isla markaana laga soo qabtay deegaanka Dacaaraha oo u dhow degmada Qoryooley ee G/Shabeellaha Hoose.
Si kastaba Al-Shabaab ayaa horey waxaa ay dil ugu fuliyeen dad ay sheegeen inay la Shaqeeyaan dowladda Federaalka Soomaaliya iyo Dowladaha taageera,kuwaas oo goob fagaaro ah ay ku toogteen.
Previous articleSAWIRO:-Jubbaland oo soo bandhigtay Xubno kasoo goostay Al-Shabaab
Next articleDhageyso:-Warka Subax ee Radio Risaala 13-01-2020
Wakiilka QM oo la kulmay qaar ka mid ah Odayaasha Dhaqanka
Sii hayaha Ra’iisulwasaraha XFS oo la shiray wakiillada Beesha Caalamka
DHAGEYSO: Warka Habeen 22-9-2020
Farmaajo oo baarlamaanka horgeynaya ra’iisul wasaaraha Magacaaban
Gudoonka baarlamaanka oo lagala hadlay meelmarinta heshiiskii doorashada
Trump oo ka baaqday hadaljeedinta xuska 75 aad ee aas aaska Q.M
DHAGEYSO: Warka Duhur 22-9-2020
DHAGEYSO: Warka Subax 22-9-2020
Odayaasha dhaqanka Beelaha oo uu hoggaaminayay Maxamed Xasan Xaad ayaa la kulmay Wakiilka Qaramada Midoobey u qaabilsan Soomaaliya James Swan. Kulankaan oo ka dhacay xarunta...